Iindaba -Ulugcina njani ulungelelwaniso lokomba oluthe tyaba?
Ungayigcina njani imigca ethe tyaba yokugrumba?
1. Xa ifayile oxwesileyo oxwesileyo yokomba isixhobo Ugqibezela iprojekthi, kufuneka ususe udaka kunye ne-ice slag kwidrum yokuxuba kunye nokukhupha amanzi kumbhobho ophambili.
2. Ukutshintsha kwegiya xa impompo iyekiwe ukunqanda ukonakala kweendawo kunye nezahlulo.
3. Coca impompo yeoli yegesi kunye nokuthintela umlilo nothuli ngexesha lokugcwaliswa kweoyile yegesi.
4. Jonga ukuthanjiswa kwawo onke amalungu ahambayo, yongeza ioyile kwaye utshintshe ioyile rhoqo kwimpompo emzimbeni, ngakumbi ioyile kufuneka itshintshwe kube kanye emva kokuba impompo entsha isebenza iiyure ezingama-500. Nokuba kukongezwa ioyile okanye ukutshintsha kweoyile, ioyile yokuthambisa yasimahla nengahlambulukanga kufuneka ikhethwe, kwaye ukusetyenziswa kweoyile yenjini yenkunkuma akuvumelekanga ngokungqongqo.
5. Ebusika, ukuba isixhobo sokugrumba esithe tyaba simisa impompo ixesha elide, ulwelo olusempompini nakwimibhobho luya kukhutshwa ukuthintela ukuqhekeka kwamalungu. Ukuba umzimba wempompo kunye nemibhobho ikhenkcezisiwe, impompo ingaqalwa kuphela emva kokuba isusiwe.
6. Jonga ukuba ngaba igeyiji yoxinzelelo kunye nevalve yokhuseleko isebenza ngesiqhelo. Uxinzelelo yokusebenza kwimpompo yodaka iya kulawulwa ngokungqongqo ngokwemiyalelo kwileyibhile. Ixesha lokusebenza eliqhubekayo phantsi koxinzelelo lokusebenza olulinganisiweyo aluyi kudlula iyure enye, kwaye uxinzelelo lokusebenza oluqhubekayo luya kulawulwa ngaphakathi kwe-80% yoxinzelelo olulinganisiweyo.
7. Phambi kolwakhiwo ngalunye, jonga imeko yokutywina yenxalenye nganye yokutywina. Kwimeko yokuvuza kweoyile kunye namanzi, lungisa okanye ubeke itywina kwangoko.
8. Phambi kolwakhiwo ngalunye, jonga ukuba iinxalenye ezihambayo zivaliwe na nokuba indlela yotshintsho lwesantya ichanekile kwaye ithembekile.